Colts.com | बाट ब्राउजर मार्केट सेयरमा अनुगमन गर्नुहोस् Martech Zone
Colts.com बाट ब्राउजर मार्केट सेयरमा अनुगमन गर्नुहोस्
सोमबार, अगस्ट 27, 2007 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
जब मैले मा पोस्ट लेखें ब्राउजर बजार साझेदारी, पोष्टमा धेरै सुझावहरू थिए जुन मैले W3Schools.com मा तथ्या trust्कहरूमा विश्वास गर्नु हुँदैन। मैले साच्चिकै यस प्रतिक्रियालाई प्रश्न गरें ... किन विश्वमा तथ्या website्कहरू वेबसाइटबाट वेबसाइट फरक फरक हुन्छ?
ठिक छ, योगदानकर्ताहरूलाई धन्यवाद ... मैले फेला पारे कि यसले वास्तवमै फरक पार्दछ! मैले राम्रो साथी प्याट कोयललाई एक ईमेल छोडिदिए र सोधें कि यदि उनी केही तथ्या share्कहरू साझेदारी गर्न इच्छुक छन् भने Colts.com। मेरो सोच उत्सुक खेल प्रशंसक शायद वेब टेक्नोलोजीहरु को बारे मा एक साइट भ्रमण कसैलाई भन्दा एकदम फरक छ र यसको विरुद्ध मापन गर्न एक राम्रो तुलना समूह हो। र यो थियो! निम्न तथ्या्कहरू अन्तिम 870,000 XNUMX०,००० को आधारमा आधारित छन् कोल्ट्स.कमानमा:
Colts.com आगंतुक ब्राउजर बजार साझेदारी:
Colts.com आगन्तुक ब्राउजर बजार सेयर - सिंहावलोकन:
जाभास्क्रिप्ट को लागि, यो अझै पनि महान प्रवेश देखाउँदछ:
कसलाई थाहा थियो?! म अब देखि स्वतन्त्र ब्राउजर सेयर तथ्या to्क धेरै ध्यान दिनेछु उनीहरूलाई हेर्दा समग्र बजार शेयरमा अनुमानहरू बनाउनु भन्दा। एक पक्ष नोटमा, यहाँ गएको महिनाको लागि मेरो ब्लगको लागि तथ्या .्कहरू छन्। मैले वास्तवमा उनीहरूमा पहिले कहिल्यै एक नजर लिएको थिइनँ, तर तपाईं एकदम फरक देख्नुहुनेछ!
मेरो आगन्तुकहरु को लागी ब्राउजर तथ्या :्क:
प्रत्यक्ष मार्केटिंग परिवर्तन भएको छ - /०/40०/२०२० भन्दा बढि नियम छैन
VZ नेभिगेटर ... मसँग GPS छ ... अब के ?!
अगस्ट 28, 2007 मा 8: 29 AM
मैले यो पनि सुनेको छु, र जब यसले केही अर्थ राख्छ, कसैले भन्न सक्छ कि प्रत्येक साइटले अद्वितीय दर्शकहरूको कारणले फरक ब्राउजर उत्पन्न गर्नेछ। म यो सोच्न चाहन्छु कि यदि तपाईंले सबै तथ्याङ्कहरू सबैभन्दा लोकप्रिय वेबसाइटहरूमा लिनुभयो र तिनीहरूलाई जोड्नुभयो भने, तपाईंले तिनीहरूले पाएको कुरा पाउनुहुनेछ। (मैले तिनीहरूको डेटा स्रोत आफैं जाँच गरेको छैन)।
मलाई थाहा छ धेरै ब्लगरहरू फायरफक्समा ट्यून गरिएका छन्, तर कोल्टहरूले सामान्य जनतालाई पाउँछन्।
उत्कृष्ट डेटा सेट, साझेदारीको लागि धन्यवाद। राम्रो ग्राफ, पनि 🙂
LA हेडशट फोटोग्राफी
अगस्ट 29, 2007 मा 12: 58 AM
मलाई लाग्छ कि ब्लगहरू पढ्ने मानिसहरूले फायरफक्स बढी प्रयोग गर्छन्। म कहिल्यै इन्टरनेट एक्सप्लोरर त्यति धेरै प्रयोग गर्दिन। म पक्का छु कि सर्वसाधारणले यसलाई धेरै पटक प्रयोग गर्छन्।
अगस्ट 29, 2007 मा 6: 00 AM
यो चाखलाग्दो छ कि त्यो हुनेछ ... तर डाटाले प्रमाण दिन्छ कि तपाईं सही हुनुहुन्छ!
अगस्ट 30, 2007 मा 2: 36 AM
म खुशी छु कि तपाईंले W3Schools मा विभिन्न तथ्याङ्कहरूको साथ यो पुन: भ्रमण गर्नुभयो, म त्यो पोस्टमा एक डरलाग्दो टिप्पणी लेख्न लागिरहेको थिएँ!
यहाँ वास्तवमै खुलासा गरिएको बिन्दु यो हो कि तपाईले त्यस समयमा विचार गरिरहनुभएको साइटको लागि मात्र तथ्याङ्कहरू महत्त्वपूर्ण छन्। यदि उदाहरणका लागि न त तपाईंको साइट न त Colts साइटले IE मा काम गरेको छ भने, Colts मा तपाईं भन्दा धेरै समस्या हुनेछ। प्रत्येक साइटले आफ्ना दर्शकहरू र उनीहरूले प्रयोग गर्ने ब्राउजरहरूसँग काम गर्नुपर्छ।
यस क्षणमा ब्राउजर साझेदारीको समग्र मापनको रूपमा, मोजिलाले कसरी गरिरहेको छ भनेर हेर्नको लागि, म Google को ब्राउजर तथ्याङ्कहरू हेर्न चाहन्छु!
पीसी हार्डवेयर केटा
अगस्ट 30, 2007 बेलुका 8:37 बजे
कम्प्यूटर geeks निश्चित रूपमा फायरफक्स औसत shmoe भन्दा बढी प्रयोग गर्दछ। म दुबै प्रयोग गर्छु। म अहिले IE मात्र प्रयोग गर्छु किनकि म यसमा अभ्यस्त छु, तर म बिस्तारै फायरफक्स तर्फ बढ्दै छु। विशेष गरी पछिल्लो समय IE प्रयोग गर्दा एक महिनामा दुई पटक मालवेयरको चपेटामा परेपछि।
सेप्टेम्बर 10, 2007 मा 9: 58 AM
यो पोस्ट को लागी धन्यवाद! मैले आज सम्म देखेको सबै तथ्याङ्कहरू टेक्नोलोजी भारी साइटहरू हुन्, यसैले प्रयोगकर्ताहरूसँग उच्च रिजोलुसन र IE बाहेक अर्को ब्राउजर हुने सम्भावना बढी हुन्छ। म colts.com मा औसत स्क्रिन रिजोल्युसन के हो हेर्न चाहन्छु... म साँच्चै 800x को लागि डिजाइन गर्नबाट टाढा जान चाहन्छु र मेरो आधारभूत रूपमा 1024x प्रयोग गर्न चाहन्छु।